परियोजना Airbus A321 इन्जिन टेकओफ पछि बन्द
प्रश्न परियोजना Airbus A321 इन्जिन टेकओफ पछि बन्द
2 वर्ष3महिना पहिले #223 by JanneAir15
नमस्कार! म Airbus A320 परिवार मेगा प्याक डाउनलोड गरेका छन्। म सबै मोडेल (A318, A319, A320, A321) परीक्षण गरेको छ, तर जब म A321 संग टेकओफ यसको इन्जिन पाङ्ग्रा जमीन बन्द प्राप्त तुरुन्तै पछि बन्द। यो प्याक अन्य विमानहरु यो केवल A321 मा छ यो समस्या छैन। म सूचीबारे पछि र सही विधि संग मा इन्जिन बन्द गरेका छन्। म के त गलत छ थाहा छैन। कृपया यो मलाई मदत।
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: joval
2 वर्ष3महिना पहिले #224 by Gh0stRider203
हामी (LFRG - KDFW) बोल्न रूपमा म एक उडान बीचमा छु रूपमा म धेरै गर्न सक्नुहुन्न 747-400LCF मा, तर एक पल्ट म भूमि, म डाउनलोड र यो एक नजर लिन्छु।
2 वर्ष3महिना पहिले #225 by Tonny0909
तपाईं upperhead प्यानल मा FLT CTL- खण्ड मा ELAC2 बन्द सेट गर्नु पर्छ। अन्य तीन सेट। (सेक्सन 2,3 र FAC2)
र सिक्न Airbus उडान कानून:
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: Gh0stRider203, जोन्ससेक जोन्सएईई
2 वर्ष3महिना पहिले #226 by JanneAir15
मुरी मुरी धन्यवाद! म परीक्षण छौँ।
2 वर्ष3महिना पहिले #227 by JanneAir15
होइन, यसलाई काम गरेनन्। म अझै पनि त्यही त्रुटि पायो "सर्जक 1, सर्जक2र हाइड्रोलिक्स 1 # 2" जानकारी प्रदर्शनमा रातो चिन्ह लगाइएको छन्।
2 वर्ष3महिना पहिले #228 by JanneAir15
त्यहाँ अब मदत गर्न कुनै आवश्यकता छ! म समस्या मिलाएका छौं। Tonny0909, तपाईं थिए दायाँ तर ELAC2 मात्र FLT CTL तपाईं बन्द गर्न छ स्विच छ। अन्य स्विच तपाईं गर्न छ! (को upperhead प्यानल को बाँया खण्ड सहित) यो हो! तर तपाईंले आफ्नो मद्दत Tonny0909 लागि धन्यवाद।
2 वर्ष3महिना पहिले #229 by Tonny0909
राम्रो म भने मेरो मूल पोस्ट मा:
"अन्य तीन सेट मा। (सेक्सन 2,3 र FAC2)"
तिनीहरूले "बन्द" संकेत छ जब छन्।
2 वर्ष3महिना पहिले #230 by Dariussssss
खुशी यो एक हल हेर्न। तपाईं केहि थप आवश्यक छ भने, हामीलाई थाहा दिनुहोस्।
आकास खाली गर्नुहोस्।
2 वर्ष3महिना पहिले #234 by Gh0stRider203
Dariussssss यस्तो लेखे: खुशी यो एक हल हेर्न। तपाईं केहि थप आवश्यक छ भने, हामीलाई थाहा दिनुहोस्।
विशाल उहाँको मदत लागि Tonny0909 धन्यवाद!
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.244 सेकेन्ड